BUYAAS Mayelana Nathi - Abakhiqizi be-Anabolics Steroids
Luohe Hengfei Biological Technology Co., Ltd., etholakala ku-2008, iyinkampani ephezulu yezokwelapha yezokwelapha ukuhlanganisa ukukhiqizwa, i-R & D kanye nokuthengisa. Ibeka eLuohe Chemical Industry Park, ezinikele ekucwaningweni nasekuthuthukiseni imboni ehamba phambili yezokwelapha, ukuhlinzeka ngemikhiqizo emisha kanye nezinsizakalo eziphezulu zemboni yezokwelapha.
I-Hengfei Biotechnology ineqembu labaphathi abanolwazi kanye neqembu lokuqala le-R & D, okubandakanya ochwepheshe abaningi abavelele emkhakheni wokuthuthukiswa kwenqubo yezokwelapha kanye nokucwaninga ngekhwalithi yezokwelapha. Kuyaziwa kakhulu futhi kunomncintiswano kubalulekile kulezi zinkampani zemithi yokwelapha, ubuchwepheshe bokusebenza, ukuthuthukiswa kwemithi yezidakamizwa, ukukhiqizwa kwemvelo, njll. Amaklayenti kanye nabalingani benkampani bavela emhlabeni wonke, benza ubuhlobo obuseduze nezinkampani eziningi zokwelapha eNyakatho Melika, eYurophu naseNdiya ne-China.
I-high-tech ebhizinisini yezokwelapha ezinomsoco wokuhlanganisa ukukhiqizwa, i-R & D kanye nokuthengisa.
Sine laboratory ephakeme kunazo zonke nemishini, ithimba eliphezulu le-R & D emhlabeni kanye nabasebenzi bokuphatha.